Ihe ngosi 7 tupu ụgbọ ala agbaji-News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Ihe ịrịba ama 7 tupu ụgbọ ala mebie
1. Mberede na-adịghị ahụkebe ụda
Noisegba ụgbọ ala na-adịghị mma bụ "mkpu" nke ọdịda ụgbọ ala, mana maka ndị na-enweghị ihe ndabere maka mmezi ụgbọ ala, ọ na-esiri ike ikpebi mkpọtụ ụgbọ ala ahụ bụ ihe nkịtị na ihe na-adịghị mma, mana imirikiti mmadụ nwere ike ịnụ ụda mberede . Mgbe a na-anụ mkpọtụ mberede nke na-anọghị ebe ahụ, ọ pụtara na agbanweela ụgbọ ala ma ọ bụ mebie emebi. Ekwesịrị idozi ya ozugbo enwere ike.
2. Nwekwu ume oriri
Ọ bụrụ na ụgbọ ala na-agba ọsọ n'ọnọdụ dị mma, oriri ọkụ na-adịkarị jụụ ma ọ gaghị enwe nnukwu mmụgharị. Ma ọ bụrụ na oriri ọkụ na-abawanye na mberede n'ime oge ụfọdụ, ọ dị mkpa ịtụle ma ọ bụ n'ihi na ụgbọ ala anaghị arụ ọrụ.
3. Ighapu mmanu
Nsogbu a doro anya. Ọ bụrụ na enwere ntụpọ abụba na ala mgbe ụgbọ ala ahụ kwụsịrị ogologo oge, mgbe ahụ, a ga-enwerịrị nsogbu na ụgbọ ala ahụ. Agbanyeghị, ekwesiri ịmara na mgbe agbanyere igwe ikuku n'oge ọkọchị, mmiri ga-adapụsị n'ụgbọ ala ahụ ịmata ọdịiche dị n'etiti nsị mmanụ na nsị mmiri.
4. Iyuzucha agba bụ ndiiche
Mgbe engine na-arụ ọrụ nke ọma, iyuzucha gas kwesịrị ịbụ anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ. Mgbe okpomọkụ dị oyi n'oge oyi, ọ ga-ebukwa gas na-acha ọcha dị ka igwe ọkụ ọkụ. Ọ bụrụ na anwụrụ ọkụ bụ agba ndị ọzọ, nwa ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ, ma ọ bụ na ọ bụghị n'oge oyi. Anwụrụ ọcha na-egosi na injin ahụ nwere nsogbu dịka nsure ọkụ na-ezughị ezu, ọkụ mmanụ mmanụ, na ịgafe nke coolant, wdg, ọ na-adịkarị njọ ma chọọ nrụzi ozugbo.
5. Inyocha oke ọkụ
Injin ahụ nwere okpomọkụ na-arụ ọrụ kwesịrị. A na-egosipụta okpomọkụ a n'ozuzu site na okpomọkụ nke igwe coolant, nke a na-akpọkarị ya mmiri mmiri. Ọ bụrụ na okpomọkụ nke mmiri dị oke oke, ọ ga-abụrịrị nsogbu dịgasị iche iche, ọbụlagodi na enweghị mita okpomọkụ mmiri na ụgbọ ala ahụ, a ga-enwe ọkụ ịdọ aka na ntị dị elu. Lezienụ anya na nke a.
6. Isi na-egosi
Isi ebe a anaghị ezo aka na isi nke ịchọ mma ime n'ime ụlọ mgbe eji ụgbọ ala ọhụụ, mana ụfọdụ isi na-esi ísì ụtọ na mmanụ ụgbọala. Isi mmanụ ụgbọ ala na-egosi na enwere mpekere na sekit mmanụ ma ọ bụ na-ekpofu ikuku carbon dara ada, na enwere ọtụtụ ihe kpatara isi ísì ọkụ: mkpụmkpụ mkpụmkpụ, njigide ọkụ, ma ọ bụ chefuo ịhapụ breeki aka.
7. Uneven taya eyi
The taya bụ naanị ebe ụgbọ ala na-na kọntaktị na ala, ma iji nweta iche iche arụmọrụ, wiil na-adịghị arụnyere ekwesị na ụgbọ ala, na nwere dị iche iche n'ọnọdu kwa.
Previous: Thegbọ ala ahụ ọ na - eme okenye, mmanụ ụgbọ elu ya dị elu?
Ọzọ: Otu esi eme ka ụgbọ ala dị jụụ n'oge ọkọchị